I-Galaxy Fold: Lonke utshintsho olwenziwe yi-Samsung | I-Androidsis
Olu lutshintsho olwenziwe kwiGolden Fold
Kwiiveki ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba kuphehlelelwe iGolden Fold xesha kumiswe elinye ixesha elingenammiselo. Isiphelo esiphakamileyo sophawu lwaseKorea sineengxaki kwiscreen, ngenxa yomkhuseli ofanayo. Ke inkampani ibilungiselela ukwazisa uthotho lotshintsho kwifowuni, ungazi njani kutshanje. Olunye utshintsho oluye lwaziswa kwezi veki.
Kuba kubonakala ngathi Isamsung sele yenze utshintsho olufunwayo kwifowuni. Ke ngoko, ukufika kweGolden Fold kwimakethi kuya kusondela ngakumbi. Ngapha koko, inkampani kutshanje iyakuqinisekisa oko Umhla wokukhutshwa kwayo wawuzakubhengezwa kungekudala. Nangona singazi ukuba iza kuba yimalini.
Umkhuseli wesikrini yenye yeengxaki kule Galaxy Fold. Inkampani iye yafuna ukunqanda ukurhoxisa ukhuseleko ngalo lonke ixesha. Ke into abayenzileyo yile fihla imiphetho efanayo phantsi komzimba wefowuni. Oku kwenzelwa ukuthintela abasebenzisi ekubeni babe nako ukunqanda ukuyisusa.
Kwelinye icala, izilumkiso ezintsha ziya kuqaliswa. Isamsung sele ilumkisile ngaphambili ukuba umkhuseli akufuneki asuswe. Kodwa inkampani iya kubheja ezinye izilumkiso ezicace gca kubo bonke. Yeyiphi ekungafuneki ukuba incede mntu ukuba asuse isikhuseli ngoku.
Ukongeza, olunye utshintsho olwenziwe yi-Samsung ukwazisa ngeGolden Fold kukunciphisa indawo ebinayo phakathi komphezulu nomzantsi wehenjisi. Le yayiyinto ebangele ukungcola kungene ngefowuni, ukuya ezantsi nje kwesikrini. Into enokubangela umonakalo kwifowuni. Enye yeengxaki zayo eziphambili.
Olu tshintsho kufuneka phelisa zonke iingxaki zeGlass Fold. Ke siyathemba ukuba sinokwazi kungekudala kumhla wokuqaliswa kwale fowuni kuhlobo lwaseKorea. Akufuneki ukuba ithathe ixesha elide ukuba ibe semthethweni. Ke siya kuyithathela ingqalelo idatha entsha malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Olu lutshintsho olwenziwe kwiGolden Fold
UJohn Wick ulandela ekhondweni likaThanos eFortnite
I-Sony Xperia Ace: Ukubuyela kwiifowuni ezi-5 intshi